Qalabka ragga | Ragga Stylish
Muddo aan aad u fogeyn rag aad u yar ayaa adeegsaday dhammaystirnaanta habka labiskooda laakiin maalmahan qalabku wuxuu muhiim u noqday ragga xarrago leh, sidaa darteed dhammaan caawimaadda marka la dooranayo, la iibsanayo ama la isku darayo waxay noqon doontaa wax yar.
Qaybtan Waxaad kaheli doontaa tilmaamaha ilaa dalabyada, iyada oo loo marayo qalabka sababaya dareen taasna waxay dejisay isbeddello. Haddii aad rabto inaad noqoto nin xarrago leh oo sharaf leh, ha joojin isticmaalka qalabka kaa siin kara taabasho ka duwan.
Sida loo doorto muraayadaha ugu fiican ee ragga
by Qolka Ignatius samee 2 maalmood .
Markaad dooranayso nooc cusub oo muraayado ah, waa inaadan ku salayn naftaada oo kaliya naqshadda inta badan…
Sida loo nadiifiyo saacada gacanta
by Alicia tomero samee 1 toddobaad .
Saacado badan oo gacan-gacmeedku waa qaybo gaar ah oo u baahan dayactir waqti ka waqti. Haddii aad u malaynayso in aad lumisay...
Ragga jecel inay u labistaan ​​xarrago leh waxay haystaan ​​nooca ugu fiican ee guntimaha iyo noocyada guntinnada, kuwaas oo ...
Waxaan qaybtan u hibeyn doonaa noocyada dharka ugu fiican, kuwa inta badan ka dhex abuura isbeddellada ninka xarrago leh iyo ...
Noocyada daawashada raaxada
by Alicia tomero samee Bilaha 9 .
Saacadaha ku yaal xargaha curcurka ragga ayaa sii wadaya dejinta isbeddellada. Hub badan ayaa doonaya inay matalaan qalabkan sida qaybtaas ...
by Jarmal Portillo samee Bilaha 11 .
Mararka qaar muraayadaha indhaha kaliya uma adeegaan inay naga ilaaliyaan iftiinka oo ay si wanaagsan wax u arki karaan, laakiin sidoo kale ...
Saddex dhegaha dhegaha
by Alicia tomero samee Bilaha 12 .
Waxaa jira rag badan oo sharad ku galay xirashada dhagaha dhegaha. Inbadan iyo ka badan ayaa go aansanaya ...
Ku labisashada dharka nus-ka ah waa meel u dhexeysa noqoshada rasmiga iyo xirashada dharka lebbiska. Waa dhulka dhexe ee ...
Noocyada isku xidhka
Ragga badani uma baahna ururintaas yar ee isku xidhka labiskooda, maaddaama ay tahay dhammaystirka muran-la’aanta ...
Dharka hoose waa dharka uu nin walba adeegsado, oo had iyo jeer lagu qeexo inuu yahay nigis, oo ka qarsoon indhaheenna iyo in ...
Tutorial loogu talagalay gunti isku xirnaan ah
Ragga badankood waxay xirtaan nooc isku mid ah oo gunti ah noloshooda oo dhan. Waa la qaatay…
Noocyada daloolinta dhagaha ee ragga
Waa maxay suunka ugu habboon ee surwaal kasta?
Koofiyado xidho si aad madaxa ugu daboosho xarrago